मलेसियामा जारी सिएमसिओ अवधीभित्र के के गर्न पाइने? के के गर्न नपाइने? - Malayakhabar
होम पेज मलेसिया विशेष मलेसियामा जारी सिएमसिओ अवधीभित्र के के गर्न पाइने? के के गर्न नपाइने?
मलेसियामा जारी सिएमसिओ अवधीभित्र के के गर्न पाइने? के के गर्न नपाइने?
क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न मेय १३ तारिखदेखी जुन ९ तारिखसम्म ४ हप्ता सम्मको लागी खुकुल्लो आवागमन नियन्त्रण आदेश (सिएमसिओ ) लम्ब्याइएको छ्न।
साथै मलेसिया सरकारले जारी सिएमसिओ सम्बन्धि नयाँ नियमहरु लागु गरेका छ्न।
नयाँ सिएमसीओ नियम : सिएमसिओ अवधीभित्र के के गर्न पाईन्छ त ?
— कोरोना भाइरस संक्रमित क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा आवतजावत गर्न पाईने छैन।
— निजी सवारीसाधन कारमा अधिकतम ४ जनाले यात्रा गर्न पाउछन् । तर उनीहरू सबै एउटै घरकाे हुनुपर्ने।
— कुनै आफन्तकाे मृत्यु भएको खण्डमा अन्तिम दाहसंस्कारमा २० जना भन्दा बढि व्यक्तिहरु भेला हुन नपाउने।
— सार्वजनिक यातायातमा क्षमताको आधा यात्रुहरुमा मात्रै यात्रा गर्न पाउनेछन । त्यो पनि सामाजिक दुरि कायम गरेर यातायातको सिटमा बस्नु पर्ने ।
— ट्याक्सी तथा अानलाईन कार सेवाहरुमा बढीमा २ जनाले मात्रै यात्रा गर्न पाउनेछन् ।
— मलेसियाका कुनै पनि नागरिक, मलेशियन स्थायी बासिन्दा अथवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका प्रवासीहरू मलेसिया आइपुगेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ सिएमसिओ नियम : सिएमसिओ अवधी भित्र निषेधित क्षेत्र र के के गर्न नपाइने?
— भीड जम्मा हुने सक्ने स्थानहरु सबैलाई निषेधित गरिएको छ । जस्तैः मनोरन्जन, पार्टी , समुहमा जम्मा भैइ मनोरन्जनका गतिविधिहरू: डिस्काे, बार, सिनेमाहलहरु सञ्चालन गर्न नपाइने र जन नपाइने ।
— धार्मिक स्थानमा भेला भएर प्रार्थना गर्न नपाइने , सांस्कृतिक मेलाहरु समेत लगाउन नपाइने ।
— भीड जम्मा हुन मद्दत गर्न सक्ने कुनै पनि व्यापारिक,ब्यवसायीक गतिविधिहरु गर्न नपाइने।
— कपडा चेन्जिङ काेठाहरु, व्युउटिपालर तथा सैलुनहरु सुचारु गर्न नपाइने।
— क्रूज जहाज गतिविधिहरू , पर्यटन सेवाहरू र आवास परिसरहरूमा हुने सेवाहरू लगायत मलेसियाकाे सन १९९२ काे ऐन ले बिधिवत गरेकाे सम्पूर्ण पर्यटन उद्योगहरु बन्द रहने।
— वित्तीय सेवा उद्योगको बिक्री र मार्केटिंग वा उनीहरूको परिसरबाहिर सार्वजनिक स्थानहरूमा गरिने बैंकिंग सेवाहरु सुचारु गर्न नपाइने।
— कुनै व्यपारिक परिसरहरुमा गरिने मार्केटिंग तथा व्यवसायीक परिसर भन्दा बाहिर सार्वजनिक स्थानहरूमा गरिने फूड कोर्ट, फेरीवाला केन्द्रहरू, फूड स्टल्स, फूड ट्रक आदिमा । यधपी खाद्यान्नकाे लागि याे लागु हुने छैन ।
— सामुहिक रुपमा गरिने मेसिनरी गतिविधिहरु, मर्मतहरु जस्ताे: लिफ्ट, एस्केलेटर, टावर क्रेन जस्ता मेसिनरी गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छन । किनभने यस्ता मेसिनरी सामाग्रीमा मानिसहरु धेरै जना भेला हुने गर्दछ ।
— केन्द्रीकृत श्रमिक क्वार्टरहरु , कर्मचारीहरूको छात्रावास भिडभाड जम्मा हुने सम्पूर्ण गतिविधिहरू बन्देज लगाइएको छ।
यी नयाँ लागु गरिएको सिएमसीओ नियमहरु उल्लंघन गरेकाे खण्डमा मलेसियन कानुन अनुसार आरएम १ हजार नगद वा अधिकतम ६ महिना जेल सजाय वा दुबै सजाय हुन सक्ने मलेसिया सरकारले जनाएका छन ।स्थानीय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले समाचारमा उल्लेख गरेकाछ्न ।
कोरोनाले अहिलेसम्म मलेसियामा ५३ जना नेपाली श्रमिक संक्रमित भएका छ्न जसमध्ये ३ जना उपचार सकिएर निको भैईसकेको जनाइएको छ्न ।
त्यस्तै कोरोनाले अहिलेसम्म मलेसियामा जम्मा संक्रमितको संख्या ६ हजार ७ सय २६ रहेको छ्न , त्यसमध्ये ५ हजार १ सय १३ जना निको भैईसकेका छ्न , र अझैपनि १ हजार ५ सय ४ जना उपचाररत रहेका छ्न भने १ सय ९ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छ्न।
अघिल्लो लेख नेपाली श्रमिकलाई खाद्यान्न समस्या छ्? घेदुङ र तामाङ कलाकारसंघलाई सम्पर्क गर्नुस्।
पछिल्लो लेख साउदीमा कार्यरत ५ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिकलाई आवासबाट निकालियो।
NRNA मलेसियामा श्रमिकलाई “सहयाेग र उद्दार” परियोजनाको लागी अस्थायी जागिर खुल्यो।
मलेसियामा कार्यरत ११ नेपाली पाँच महिनादेखि अलपत्र।